स्थानीय तह निर्वाचनले तरलतामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»स्थानीय तह निर्वाचनले तरलतामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
स्थानीय तह निर्वाचनले तरलतामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
By लाल्टिन डट कम April 5, 2022 No Comments3 Mins Read
नेपालमा आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्त र मतपत्र छपाई लगायतका कामहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढाइ रहेको छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ ।
खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मरवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । ५० हजारभन्दा बढी आर्तिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरुले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।
यसरी, स्थानीय चुनावको खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गरिने हुँदा तरलतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
#स्थानीय तह निर्वाचनले तरलतामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?